असहायलाई २७ घर- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
असहायलाई २७ घर
आफ्नो थातबास उभ्याउन नसक्नेका लागि निर्माण गरिएका घर अपांगतामैत्री र बालमैत्री
चैत्र २९, २०७५ आश गुरुङ
लमजुङ — भूकम्पबाट प्रभावित दोर्दी गाउँपालिकाका अपांगता भएका र असहाय २७ परिवारले नयाँ घर पाएका छन् । नयाँ घर पूर्ण रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी बनेको छ ।
लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा बनेका घर हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र बुझेपछि अपांगता तथा असहाय नागरिक । तस्बिर : आश/कान्तिपुर
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आफ्नो थातवास उभ्याउन नसकेकाहरूका लागि घर निर्माण गरिएको हो । यसमा अपांगता अवस्थाका १२ परिवारको घर बनेको छ । दोर्दी गाउँपालिकाका ९ वडामध्ये वडा ४, नौथर, ५ को पाचोक र ६ को ढोडेनीमा ७/७ वटा नमुना आवास बनाइएको छ । वडा १ को भारते, २ को अर्चलबोट, ३ को श्रीमञ्ज्याङ, ७ को फलेनी, ८ को बन्सार र ९ को हिलेटक्सारमा एउटा/एउटा घर निर्माण गरिएको छ । जनजाति २०, आदिवासी १, दलित ५ र ब्राह्मणका एउटा घर निर्माण भएको हो ।
टियर फन्ड यूकेको आर्थिक सहयोगमा इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप (आईएनएफ) ले शतप्रतिशत लगानीमा अपांगता तथा असाहयको घर निर्माण गरिदिएको हो । एउटा घर निर्माणमा आइएनएफले ५ लाख ९६ हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेको छ । नमुना आवास निर्माणमा मात्रै १ करोड ८२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सेल्टर परियोजना दोर्दीका संयोजक दिनेश कुँवरले बताए । उनका अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी घर अपांगतामैत्री र बालमैत्री बनाइएको छ । शौचालयसमेत निर्माण तथा मर्मत गरिदिएको उनले बताए ।
आइएनएफ कास्की कम्युनिटी क्लस्टरका म्यानेजर विष्णु गिरीका अनुसार स्थानीय गाउँमै पाइने स्थानीय स्रोत ढुंगा, माटो र काठ प्रयोग गरी भूकम्पपीडितका घर निर्माण गरिएको छ । अपांगता भएकालाई मध्यनजर राखेर शौचालयका केही ठाउँमा कम्बोट प्यान राखिएको छ । ‘हामीले अपांगता र असाहय घर छनोटका लागि गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाएका थियौं । यसमा २७ घर छनोट भयो । हामीले उक्त घर निर्माण गर्‍यौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार १ सय ५० जना डकर्मीलाई तालिम दिएर घर निर्माण गर्न लगाइएको थियो । गाउँपालिका साथै सबै वडामा विपद व्यवस्थापन समिति गठन साथै दोर्दी गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ लाख १० हजार सहयोग गरेको उनले बताए । दोर्दी गाउँपालिका ४, नौथर शेरामा बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, संघीय सांसद देव गुरुङले २७ घरपरिवारलाई आवास हस्तान्तरण गरे । उनले भने, ‘पुनर्निर्माणमा सरकारलाई सबैको साथ र सहयोगको आवश्यक छ ।
समयमै पुनर्निर्माण सक्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र लाभग्राही स्वयं पनि लाग्नुपर्छ ।’ भूकम्प गएको ४ वर्ष पुगे पनि वास्तविक पीडित कतिपयको घर पुनर्निर्माण हुन नसकेकाले समयमै पुनर्निर्माण सक्न उनले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । ‘अझै पनि कतिपय पीडित छाप्रामा छन् । कतिपयले वडा तथा स्थानीय तहमै आउन सकेका छैनन् ।असाहय तथा विपन्नलाई सहयोग पुग्ने गरी अघि बढौं ।’
संस्थाले हाल १२ जिल्लामा काम गरिहरेको आईएनएफ नेपालका सामुदायिक निर्देशक डा. बुद्धिबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार अपांगता सशक्तीकरण, पुनःस्थापना र समावेशीकरण, भूकम्पीय पुनर्निर्माण, विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य तथा विकास, मातृ शिशु तथा पोषणको क्षेत्रमा काम गर्दैआएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य ढिलाइ भएकाले यसलाई चाँडो सक्नुपर्ने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराई, दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङ, गैरसरकारी संस्था महासंघ लमजुङका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भट्टराईलगायतले भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण भएनभएकोबारे सबै चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ १०:११
म्याग्दी — हावापानी अनुकूल हुने प्राविधिकको सुझावपछि जिल्लाको दुर्गम धौलागिरि गाउँपालिकाले ३ हजार १ सय घरधुरीलाई दाँतेओखरका २–२ वटा बिरुवा रोप्न लगाएको छ । गाउँपालिकाभित्रका सबै घरधुरीलाई रोप्न लगाइएको हो ।
गाउँपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका एक विद्यार्थी बराबर दुइ बोटका दरले ५ हजार दाँतेओखरका बेर्ना रोपिएको हो । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र फलफूल र जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न पहिलो चरणमा नमुनाका रूपमा ओखर सबैको बारीमा पुर्‍याइएको हो । त्यसैगरी व्यावसायिक खेती गर्न स्थानीयलाई २० हजार सिल्टिमुरका बेर्ना पनि वितरण गर्न थालिएको छ ।
त्यसैगरी व्यावसायिक जडीबुटी प्रवर्द्धन गर्न धौलागिरि गाउँपालिकाले बहुमूल्य जडीबुटी सतुवाको ५० हजार बेर्ना धमाधम वितरण गरिरहेको छ । धौलागिरि गापा, १ गुर्जा, ४ मुदी र खिवाङ्गमा छुट्टाछुट्टै जडिबुटी तथा कृषि समूहमार्फत १४ हजारका दरले र ८ हजार २ नम्बर वडाको खोरिया आधारभूत विद्यालयले सतुवाको खेती गर्न सुरु गरेका छन् । सतुवाखेती गर्न समूहले निजी बाँझो जग्गा २० वर्षका लागि निःशुल्क लिजमा लिएका छन् ।
‘हाम्रो प्राथमिकता व्यावसायिक जडिबुटी, फलफूल र पशुपालन नै हो । गापाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पनि सडकपछि यही क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका छौं,’ धौलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन्, ‘धौलागिरि वास्तवमा हर्बल हव नै हो । धौलागिरीका गुर्जा, लुलाङ्ग, मुदीबाट बर्सेनि करोडौं मूल्यका जडिबुटी निकासी हुने गरेको छ ।’
धौलागिरी प्रथम, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं, मानपाथी, चुरेन, पुथा र गुर्जासमेत १० वटा हिमाल रहेको धौलागिरी गाउँपालिकाले म्याग्दीको ४५ प्रतिशत भुगोल ओगटेको छ । धौलागिरी गापा, १ गुर्जाबासीको मुख्य आम्दानीको श्रोत नै यार्चागुम्बा, जंगली च्याउ समेतका जडिबुटीको ब्यापार हो । यार्सागुम्बा, रातो च्याउ, सतुवा समेत बहुमुल्य जडिबुटी र वनस्पतीको उत्पादन र निकासी गरी जीविकोपार्जन गर्ने हुँदा गुर्जालाई हर्वल भिलेजपनि भनिन्छ ।
‘गुर्जामा प्रयाप्त जग्गा छ, जडिबुटी खेतीको संभावना छ र सफल प्रयोग पनि भएको छ, बजारको चिन्ता लिनु पर्ने छैन । म प्रष्ट छु त्यसैले हर्वल हव गुर्जा बनाउने वाचा कार्यान्वयन सुरु गरेको छु,’ वडाध्यक्ष झकबहादुरले भने, ‘यस बर्षदेखी समुहमा सतुवा खेती सुरु गरेका छौं, अरु जडिबुटीको पनि व्यावसायीकरण गर्ने प्रयत्नमा छौं ।’
डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीको अभिलेख अनुसार धौलागिरी गाउँपालिकाबाट मात्र ३० क्विन्टल रातो च्याउ उत्पादन हुन्छ । वन कार्यालयले जिल्लाभित्र खपत हुने च्याउको संकलन र छोडपुर्जी दिने गरेको छैन ।
गुर्जाको जंगलमा यार्चागुम्बु, रातो, गुच्ची र खुत्ले जातका च्याउ व्यापारिक प्रयोजनमा संकलन गरिन्छ । वडाध्यक्ष समेत रहेका व्यापारी झक छन्त्यालका अनुसार गुर्जामा अघिल्लो वर्ष यार्चागुम्बु प्रतिकेजी ५ लाख, गुची च्याउको प्रतिकेजी २० हजार, खुत्के च्याउको ८ हजार र रातो च्याउको एक हजार पाँच सयमा किनबेच भएको थियो ।
यार्चागुम्बु, रातो, गुची, खुत्के च्याउबाहेक गुर्जाबाट कटुकी, पदमचाल, पाँच औले, सिलाजित, विष, सतुवासमेत तीन दर्जनबढी जडिबुटी निर्यात गरी वार्षिक सरदर ८० लाख बढी भित्रिने गरेको छ । यार्चागुम्बु र खुत्के च्याउ चीन निर्यात हुन्छ भने गुची च्याउको माग दक्षिण भारतमा बढी छ ।
प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ १०:१०